Shirkadda Golis Telcom oo soo bandhigtay adeegga “Af-Garad” | Golis Telecom Somalia
Shirkadda Golis Telcom oo soo bandhigtay adeegga “Af-Garad”
Munaasabad lagu daah-furayay adeeg cusub oo ay shirkadda Golis soo kordhisay oo loogu magacdaray “AFGARAD” ayaa kadhacday xarunta weyn ee shirkadda ay ku leedahay magaalada Bosaaso iyadoo ay kasoo qayb-galeen masuuliyiinta shirkadda iyo bahda saxaafadda.
Madaxa Suuqgaynta ee Shirkadda Golis C/raxmaan Cabdilaahi Dayax oo furay munaasbadda ayaa ka warbixiyay adeegga Afgarad. Dayax waxa uu sheegay in adeega Af-Garad uu sahli doono tarjumidda luuqadaha Somaaliga iyo English-kaba.
Cumar Ciise Maxamed (Faaruuq) oo ah madaxa Hoggaanka ganacsiga ee shirkada Golis ayaa sheegay in adeegani Af-Garad uu ka caawin doono bulshada isticmaalka iyo turjimaada luuqada English-ka.
Madaxa Hawl galada ee shiradda Golis C/llahi Cali Cumar ayaa ayaa sheegay in adeegga Af-garad uu ka haqab tiri doono bulshada ku dhaqan degaanada Puntland adeegani isku tarjumida labada luuqadood oo ay mas’uuliyiintu horey u sheegeen.
Adeeg Af-Garad oo ah qaamuus (Somali To English iyo English To Somalia) ayaa ah adeegii ugu horeeyey ee nuuciisa oo kale ah ee laga hirgaliyo gudaha Somaliya, adeegan ayaa bishii macmiilku bixinayaa lacag dhan 5 cent oo u dhiganta 10- kun oo sh.Somaali ah taasoo qidmad ahaan kaaga go’aysa.